हेमन्तको बाल्यकालको माया - Youtube वाच - साप्ताहिक
हेमन्तको बाल्यकालको माया
अहिले प्रेम सप्ताहा चलिरहेको छ । युवापुस्ताले आफ्नो प्रणय दिवसलाई सेलिब्रेसन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यतिबेला पत्रपत्रिकाका पृष्ठहरु पनि युवा/युवतीका प्रमिल तस्विरले रंगिएका छन् । तर, बाल्यकालको जस्तो मिठो माया सायदै हुन्छ होला युवाअवस्थामा ।
त्यहि बाल्यकालको माया सम्झाउने एउटा गीत गायक हेमन्त शर्माले सार्वजनिक गरेका छन् । लेख कार्कीको शब्द तथा बि.बि. अनुरागीको संगीत रहेको ‘कुसुम’ बोलको उक्त गीतलाई निक्कैले मन पराएका छन् । गीतमा संगीत संयोजन पनि बि.बि. अनुरागीकै रहेको छ ।
सार्वजनिक गीतको म्यूजिक भिडियोमा अभिनेता सुरज सिंह ठकुरी र अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले जोडीको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यि अभिनेता र अभिनेत्रीको बाल्यकालको प्रेम दर्शाउन भिडियोमा प्राप्ती सुवेदी र आयुष चौधरी सुन्दर ढंगमा उपस्थित भएका छन् ।
निकेश खड्काले निर्देशन गरेको यो गीत बजारमा ल्याउन इश्वर काफ्लेले निक्कै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको गायक शर्मा बताउँछन् । कलाकार तथा नेपाली कलालाई निक्कै माया गर्ने काफ्लेले कतारमा रहेर पनि गीत रेकर्डिङका लागि निककै हौसला पठाएका थिए । यो गीत सार्वजनिक गर्न माया केसीले पनि साथ दिएकी छिन् ।
कुसुमको म्यूजिक भिडियो :